ခရစ်ယာန်ကျမ်းစာ ၌ ပါရှိသည့် သခင်ယေရှု စကားတော်များအနက် ငွေကြေးအကြောင်းကို အခြားအကြောင်းအရာများထက် သခင် ပြောလိုပုံရသည်။ လုကာ ၁၂ က သခင့်စိတ်သဘောထားကို အထင်အရှားဆုံး ဖော်ပြသည်။ စည်းစိမ်ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကို သခင် အပြစ်ဖွဲ့ ထားခြင်း မဟုတ်ပါ။ သို့သော် အနာဂါတ်ဘ၀ လုံခြုံစိတ်ချရအောင် ငွေကြေး
Read more: ငွေကြေးပြသနာ (နေ့စဉ်ခွန်အား)
Read more: ခရစ်ယာန်နှင့်ဆုတောင်းခြင်း
ကိုယ်တွေ့ (စောပက်ထရစ်၊ Maranatha Fellowship)
ဥပမာ ..သူရဲရှိသည်၊ မရှိဘူး ဆိုသည်မှာ အချေတင်ပြောမကုန်သော အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ မမြင်ဘူးသောသူ အများစုက မရှိဟု ဆိုသည်။ သို့သော် မြင်ဘူးသောသူများက ရှိသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော ကိုယ်တိုင်သရဲခြောက်ခံဂရသူများက
Read more: ကိုယ်တွေ့ (စောပက်ထရစ်၊ Maranatha Fellowship)
ဘ၀အောင်မြင်မှု ရယူနည်း - Larry Burkett
ဆုတောင်းလျှင်လည်း ကာမဂုဏ် ခံစားစရာတို့ ရှိစေခြင်းငှာ အလွဲတောင်းသောကြောင့် မရကြ။ ရှင်ယုဒ ၄း၃
ဘ၀အောင်မြင်ခြင်းကို ဘုရားရှင်၏ အမြင်မှာ လောကသားအမြင်နှင့် မတူညီပါ။ ဘုရားရှင်အလိုကျ လောကအောင်မြင်မှုရဖို့ သင်မည်သို့ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံရမည်နည်း?
ယနေ့ မဂ္ဂဇင်းစာအုပ်များစွာတွင် ဘ၀အောင်မြင်ခြင်း၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ထုတ်ဖေါ်ပေးမည်ဟုသော ကြော်ငြာများစွာ တွေ့ရှိပေမည်။ အမှန်ပြောရလျှင် သူတို့သည် ဘ၀အောင်မြင်မှုလျှို့ဝှက်ချက် များကို မဖေါ်ပြနိုင်ပါ။ သင်ကိုယ်တိုင် တုံ့ပြန်မှုရှိမှသာ လျှို့ဝှက်ချက်များကို ရနိုင်ပေသည်။ သို့သော် သူတို့ပြောသော ဘ၀အောင်မြင်မှု ဆိုသည်မှာ ငွေ၊ အာဏာ၊ ရာထူး များကို ဆိုလိုကြောင်း ထင်ရှားလှပေသည်။
Read more: ဘ၀အောင်မြင်မှု ရယူနည်း - Larry Burkett
ဘာဘုလုန်ရှင်ဘုရင် အာတဇေရဇ်မင်းကြီးလက်ထက် တိုင်းတပါးသို့ကျွန်အဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားခံရသော အစ္စရေးလူမျိုး နေဟမိအကြောင်း၊ ယေရုဆလင်တံတိုင်းတော် ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအကြောင်း သမ္မာကျမ်းမှကောက်နှုတ် ဟောကြားသော ဆရာတိုးစက် ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းဖြစ်သည်။
အခန်း(၁)။ နေဟမိ၏ သူကိုယ်တိုင်မည်သို့တုန့်ပြန်သနည်း၊ မည်သို့ ပြင်ဆင်သနည်း။ အစ္စရေးလူမျိုးတို့၏ ကျမ်းစာတွင် ဧဇရ နှင့် နေဟမိ နှစ်ခုပေါင်းပြီး ကျမ်းတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ဧဇရသည် ယေရုဆလင်သို့ ပြန်လည်အခြေချသောအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး၊ နေဟမိမှာ တံတိုင်းတည်သောအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ ဘာဘုလုန်ဘုရင်ကြီး အာတဇေရဇ်မင်းကြီး Artaxerxes I , 445 BC အနှစ်၂၀မြောက် နန်းသက်အချိန်၊ ယခုခေတ် နိုဝင်ဘာ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂လတာကာလ အချိန်ဖြစ်သည်။ ဘာဘုလုန်နန်းတော် ဆောင်းရာသီ ရှုရှန်နန်းတော်တွင် နေဟမိထံသို့ သတင်းရောက်လာသည်။ ယေရှုဆလင်မြို့တွင် ရှိနေသော အစ္စရေးလူမျိုးများ၏ ကြီးစွာသော ဒုက္ခ၊ဆင်းရဲခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းများ ခံနေရသည်ကို ကြားသိရသောကြောင့် နေဟမိသည် ငိုကြွေးမြည်တမ်း၊ အစာရှောင်လျှက်၊ ကောင်းကင်ဘုံရှင် ဘုရားသခင်ထံတွင် ဆုတောင်းသည်။ မိမိကဲ့သို့ အစ္စရေးလူမျိုးများ၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လျှက်ပင် ဘုရားကို ပြစ်မှားသော မိမိတို့ဆွေမျိုးများ အပြစ်များ ဘော်ပြ၊ ၀န်ချတောင်းပန်သည်။ နှစ်လတာလုံး ကယ်မပါရန် ဆုတောင်းခြင်းမှ ရှင်ဘုရင်၏ ဖလားတော်ကိုင်ဖြစ်လာသည်။
Read more: နေဟမိမှတ်စာ ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်း
တိုင်းနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့ တစ်နိုင်ငံ ကြားမှာ ကြီးမားတဲ့ ခြားနားချက် ဘယ်မှာ ရှိလို့လဲ။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ဒေသကို သွားသွား "လူ" များနဲ့ သေချာပေါက် သင်တွေ့ရမှာပဲ။ လူတွေဟာ ပုံပန်းသဏ္ဍန် အသားအရောင် ကွဲပြားခြားနားမယ်။ လူတွေဟာ ပညာနဲ့ အဆင့်အတန်း ဂုဏ်ဓန ကွာခြားချင်လည်း ကွားခြားမှာပေါ့။ သို့သော် လူလူချင်း ဖြစ်ပြီးတော့ အားလုံးအတူတူပါပဲ။ သူတို့အားလုံးကို ချစ်ရမှာဖြစ်သလို သူတို့အားလုံးဟာ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို လိုအပ်နေသူလည်း အမှန်စင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ပါရဲ့။
ကျွန်မရဲ့ အနက်ရှိုင်းဆုံးသော နှလုံးသားနေရာမှာ နှစ်သက်ခဲ့ပါတယ်။ ခံစားရပါတယ်။ ဆာရီ (Sari) က သီလရှင်စစ္စတာများကို ဆင်းရဲသူတွေထဲက သာ၍ ဆင်းရဲသော ခံစားမှုကို ပေးပါတယ်။ ဖျားနာခြင်းနှင့် အတူ ကလေးသူငယ်များနှင့်အတူ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများနဲ့ အတူ၊ မပြေလည်သောသူများနှင့် အတူ၊ တသားတည်း ဖြစ်စေပါတယ်။ မစ်ရှင်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆင်းရဲသောသူများ ၏ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုအတိုင်း ၀တ်ဆင်ပြီး ခံစားမှုကို မျှဝေခံစားခဲ့ကြတာပါ။ အိန္နိယ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ...
ကျွမ်းကျင်သူအတတ်ပညာရှင်များ၊ အသိပညာရှင်များ၊ စီးပွားရေးသမားများ၊ ဆရာဝန်များ၊ သူနာပြုများ၊ အစွမ်းအစ ရှိသူများကို အမှန်လိုအပ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများ နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများ ပြည့်စုံပြီးမြောက် အောင်မြင်ဖို့ ကျွန်မတို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းရမလဲ။ မသိနိုင်ပါဘူးရှင်။ ဒီအတောအတွင်းမှာ လူတွေဟာ အသက်ရှင် နေထိုင်ဖို့ ရှိနေတယ်။ အစားအစာကို လိုအပ်လို့ ပေးရပါတယ်။ ၀တ်ဆင်ဖို့အတွက် အ၀တ်ကို ရမှ ဖြစ်ပါမယ်။ ဂရုပြု စောင့်ရှောက်မှု လည်း သေချာပေါက် လုပ်ပေး ရမဲ့ ကိစ္စပါ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု နယ်ပယ်က ဒီနေ့ အိန္နိယ အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအပ်ချက်တွေ ဆက်လက် တည်ရှိနေဦးမယ် ဆိုရင် ကျွန်မတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ကလည်း ဆက်လက် တည်ရှိ နေရဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။
Read more: ကြင်နာခြင်း၏ပထ၀ီဝင် မာသာထရီစာ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ (၇)ရက် ၂၀၁၁ (တနင်္လာနေ့)
တကျွန်းနိုင်ငံအရပ်သို့ ငါ့ရှေ့မှ ငြိမ်ဝပ်စွာနေကြ၊ လူအမျိုးမျိုးတို့ အားဖြည့်ကြ၊ ချဉ်းကပ်၍ ပြောကြ၊ တရားတွေ့ကြကုန်အံ့ (ဟေ ၄၁း၁)
မလေးရှားနိုင်ငံတွင် အလုပ်လုပ်သောသူများနှင့် နေထိုင်သောလူအချို့မှာ တတိယနိုင်ငံဟူသော နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ ထွက်ခွာရန် ကြံစည်ကြပါသည်။ အချို့လည်း အဆင်ပြေ၍ သွားလာခွင့်ရကာ၊ သာ၍ တိုးတက်သော နိုင်ငံကြီးများသို့ ထွက်ခွာ၍ လောက ဥစ္စာ၊ စိးပွားရှာကြပါသည်။ သာ၍ စိမ်းလန်းသော ကျက်စားရာ ဒေသသို့ ထွက်ခွာ၍ စွန့်စား သွားမည့် သူများသည် နိုင်ငံသစ်အတွက် ပစ္စည်းများကို မလေးရှားနိုင်ငံမှာ ပြင်ဆင်၍ ယူသွားကြပါ၏။ မလေးရှားနိုင်ငံမှာက ပစ္စည်း၊ ပစ္စယက ဈေးသက်သာပါသည်။ နိုင်ငံသစ်မှာက ဘယ်လိုမှန်းမသိ၍ ယူစရာရှိတာကို ယူကြရတာမို့ ချင်းကလေးတန်ဘူး၏ အမျိုးတစ်ယောက်သည် သြစတြေးလျားတိုက်သို့ သွားခွင့်ရလျှင် သုံးရန် ဖိနပ်တောင် ၀ယ်ကာ အိတ်ထဲထည့်ပါ၏။
Read more: ဖိနပ်တစ်ရန် - ညစဉ်ခွန်အား
"ဆရာ .. လွန်ခဲ့တဲ့ ဆန်းဒေးမနက်စောစောကပဲ သမီးလေးတစ်ယောက် ထပ်ရတယ်"
"ဟ ... သမီးချည်းပဲ (၃)ယောက်၊ ပွတာပဲ"
"ဟုတ်တယ်ဆရာ။ ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ အပတ်က ကျွန်တော် ဘုရားကျောင်း မရောက်နိုင်တာပေါ့"
သမီးနှစ်ယောက်မွေးထားရာမှ "တတိယမြောက်တွင် သားလေးဖြစ်ပါစေ" ဟု မျှော်လင့်နေသော တပည့်သည် သမီးလေးသာထပ်ရလည်း ၀မ်းသာသောမျက်နှာဖြင့် ဤသို့ဆက်၍ ...
"အဲဒါဆရာ ... နက်ဖြန်ဆိုရင် သမီးလေးမွေးတာ တစ်ပတ်ပြည့်မယ်ဆိုတော့ ဆရာလာပြီး ခေါင်းဆေးပေးပါနော်၊ ဒါမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ စုံသွားမှာ"
Read more: ယနေ့တွတ်ပီ ကံမကောင်းပါ
ကြွယ်ဝတဲ့အသက်တာပေးဖို့ က္ကုသရေလလူမျိုးတွေကို မောရှေအားဖြင့် ခါနန်ပြည်ကိုပို့ ဆောင်ပါတယ်။ ဘုရားကိုသာ ယုံလိုက်ပါ။ ကြွယ်ဝသောအသက်တာပေးမယ် ကျမ်းစာကပြောပါတယ်။ သူ့ကိုယုံဖို့က လွယ်သလိုလိုနဲ့ ခက်သလို၊ ခက်သလိုလိုနဲ့လည်း လွယ်ပါတယ်။ ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ မောရှေ၊ ယောရှုတို့ ဘုရားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာဗြာဟံကလည်း ဒီနေရာ ခန္တာပြည်မှာပဲ ကြွယ်ဝတဲ့ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတော်ယဇ်ကို ရောက်တဲ့နေရာမှာ ပူဇော်ပါတယ်။
Read more: ဂေရဇိန်တောင်မှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ
Rev. Dr ချိုမနားလိန်း
မေးခွန်းများစွာထဲမှ မကြာခဏကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးလေ့ရှိသည့်မေးခွန်း၊ယုံကြည်သူများက မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းမှာ “ဘုရားသခင်၏အလိုတော် ကိုကျွန်ုပ် ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ” ဟူ၍ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သင်းအုပ်ဆရာများ၊ ဓမ္မအမှုတော်ဆောင်များက တရားဟောစဉ် ပလ္လင်ပေါ်မှ ပရိသတ်များအားတရားမဟောခင် မေးလေ့ရှိသော၊ အရေးကြီးသော ခွန်အားယူစရာမေးခွန်းလည်းဖြစ်ပါသည်။ စာဖတ်သူမိတ်ဆွေများလည်း ဤမေးခွန်းကိုမေးပြီးပြီလား။ ထိုအလိုတော်ကိုရော သိပြီလား။ လိုက်လျှောက်ရန်ဆန္ဒရှိမည်ဆိုပါက၊ သက်သာလောနိသြဝါဒစာပထမစောင် ၅း၁၆-၁၈ ကိုဖတ်ရှုလေ့လာဆင်ခြင်ပြီး လက်တွေ့ကျင့်ဆောင်ကြပါစို့။
Read more: အရာရာ၌ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခြင်း
ဦးတင်မောင်ထွန်း (ညီအစ်ကိုကြီး Dr.)
သားသမီးတို့သည် မိဘနှစ်ပါးကို ရိုသေလေးစားစွာ ဆက်ဆံကြသည်။ ၁၉၆၅-၇၀ ဧ၀ံဂေလိနိုးထမှုဖြစ်ချိန်တွင် ဘုရားနှင့်လူသည် ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးလို အလွန်အဝေးကြီးမရှိ၊ မိတ်ဆွေကဲ့သို့ မိမိအနီးမှာပင်ရှိသည် ဟုခံယူပြီး၊ အချို့က လေးစားထိုက်သောဘုရားကို မိတ်ဆွေကဲ့သို့
Read more: အလင်းအားဖြင့် ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့
ခရစ်စမတ်၊ နှစ်သစ် ၂၀၁၁ အင်တာနက်မှ အဆိုကျော်များ၏ မြန်မာဓမ္မသီချင်းများ
မှတ်မှတ်ရရ အင်တာနက်တွင် တွေ့နိုင်သော မြန်မာဓမ္မသီချင်းများ
ထိုင်းနိုင်ငံရောက် မြန်မာ ၃သန်းခန့်ရှိကြသည်။ ဘန်ကောက်မှာ အခြေပြုတဲ့ အမ်စီအေအသင်းတော်မှ ခရစ်စမတ်အကြို ကိုးကွယ်ဝတ်ပြုခြင်းမှာ မြန်မာရိုးရာ အိုးစည်ဗုံမောင်း ခရစ်စမတ်သီချင်း - ၂၀၀၈ အချိန်ကဖြစ်သည်။
Read more: ခရစ်စမတ်၊ နှစ်သစ် ၂၀၁၁ အင်တာနက်မှ အဆိုကျော်များ၏...